चीनसँग सी’मामा त’नाब बढेपछि भारतले बोलायो गोर्खा सै’निक…हेर्नुहोस् ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
चीनसँग सी’मामा त’नाब बढेपछि भारतले बोलायो गोर्खा सै’निक…हेर्नुहोस् !
काठमाडाैं : भारत र चीन सीमामा ४५ वर्षपछि पहिलोपटक दुई देशका सै’निकबीचको दोहोरो भि’डन्तमा मानवीय क्ष’ति भएको छ । सोमबार राति भएको दुई पब’क्षबीचको भि’डन्तमा भा’रतीय एक सै’न्य अधिकारी र दुई सै’निक जवानको मृ’त्यु भएको भारतले जनाएको छ ।
यद्यपि, दुई देशका सैनिक अधिकारीबीच पछिल्लो अव’स्थालाई लिएर वार्ता पनि भइरहेको जान’कारी दिइएको छ ।५ मेमा लद्दाखको प्या’न्गोङ सो हिमतालनजिकै दुई देशका सै’निकबीच ध’केलाधकेल हुँदा दुवैत’र्फका केही सैनिक घा’इते भएका थिए । भि’डन्त गर्ने अव’स्थामै दुई देशका सैनि’क पुगिसकेका थिएनन्।
चिनियाँ जनमु’क्ति से’ना यसअघिको लाइन अफ ए’क्चुयल क’न्ट्रोल पार गरेर भारतीय भू’मिमा केही किलोमिटर भित्र आएपछि त’नाव भएको भारतको दा’बी छ । सी’मामा त’नाव बढेपछि दुवै देशले सै’न्यस्तरको वार्ता र सी’मामा सै’न्य उपस्थि’ति बढाएका छन् ।
तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने भारतीय सैनि’कहरू चिनियाँ सी’मा पार गर्दै घु’सेपछि चिनियाँ सै’निकसँग झ’डप भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।यसैबीच चीनसँग लद्दाखमा यु’द्वको स्थिति बनेपछि नेपालमा छुट्टी मनाइरहेका गो’र्खा सै’निकलाई भारतले फि’र्ता बोलाएको छ ।
भारतमा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण बढ्नुअघि भारतीय से’नामा का’र्यरत गो’र्खालीहरू छुट्टी मनाउन घर फ’र्किएका थिए । तर, चीनसँग उत्तरी सी’मा वि’वाद चु’लिएपछि भारतीय सेनाले छुट्टी मनाइरहेका गो’र्खालीलाई काममा फ’र्कन आदे’श दिएको छ ।, यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous मलाई सं’स्कारी श्रीमान् चा’हियो-मीना ढकाल,,,पूरा पढ्नुहोस!
Next ग्रेट न्युज: कुलमान घिसिङले घटाए घरायसी ग्राहकको विद्युत महसुल,अब कति ति’र्नुपर्छ…हेर्नुहोस् ।